Nubia Red Magic 6 ayaa ku imaan doonta qiime cusbooneysiin ah oo ka badan 144 Hz | Androidsis
Toddobaad ka yar, Nubia waxay soo saari doontaa taleefan casri ah oo cusub. Hore ayaan uga hadalnay tan waqtigaas, waxaanna daaha ka qaaday inay tahay 4-ta Maarso taariikhda bilowga ee terminalku ku faano, kaas oo ku dhici doona suuqa sida Sixirka Cas 6.
Sida aad filan karto, taleefanka casriga ahi wuxuu noqon doonaa mid waxqabadkiisu sarreeyo, isla markaana la siiyo taariikhda sumcadda 'ZTE sub-brand', waxay soo bandhigi doontaa astaamo gaar ah iyo hawlo ciyaaro gaar ah. Tan waxaa ka mid ah sicir cusbooneysiin heer sare ah, oo xaaladdan, si layaab leh, uga badnaan laheyd 144 Hz, wax aan weli ka dhicin suuqa mobilada.
Maxaan ka filan karnaa Nubia Red Magic 6 cusub?
Marka laga hadlayo taleefannada casriga ah ee heer sare ah oo leh qeexitaanno farsamo oo heer sare ah, wax yar kama filan karno. Waxaa jira faahfaahin badan oo laga helay xogtaan toddobaadkan la soo dhaafay. Sidaa darteed, ma heli doonno wax lala yaabo oo weyn 4-ta Maarso, iyo wax ka yar waxa Ni Fei, madaxweynaha Nubia, uu hadda shaaca ka qaaday.
Sida laga soo xigtay kii ugu dambeeyay ee uu shaaca ka qaaday madaxa fulinta iyada oo loo marayo Weibo, shabakada bulshada ee microblogging ee Shiinaha, Nubia Red Magic 6 wuxuu yeelan doonaa shaashad leh heer cusbooneyn oo ka sarreeya 144 Hz, sida ku cad innuendo. Aynu tixgelinno in heerka cusbooneysiinta ee 144 Hz ay ​​tahay tan ugu sarreysa ee aan maanta ka heli karno shaashadda taleefanka casriga ah, iyo in yar, oo ka mid ah dabeecadda ciyaarta.
Lama oga inta jeer ee cusbooneysiinta shaashadda taleefannadan casriga ah ay bixin doonto, laakiin waxaa la qiyaasayaa in tani noqon karto 165 Hz. Tani waxay u noqon laheyd wax runtii u wanaagsan kuwa isticmaala ee ahmiyada weyn siiya xiisaha ay u leeyihiin dheecaanka gudiga taleefanka, xitaa inbadan hadii ay u heellan yihiin inay ku ciyaaraan. Si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira ciyaaro aad u yar oo taageera heerarka cusbooneysiinta sare. Dareeraha ayaa lagu ogaan doonaa, in ka badan wax kasta, waxqabadka iyo isticmaalka mobilka.
Ni Fei ayaa tilmaameysa in Red Magic 6 uu yeelan doono shaashad ka sareysa 144 Hz
Dhawr bilood ka hor ayay suurtogal ahayd in la furo heerka cusbooneysiinta 160Hz ee ROG Phone 3, mobilada ciyaaraha ee Asus. Inta jeer ee cusbooneysiinta cusbooneysiintaani waa tan ugu sarreysa ee laga helo moobiilka ciyaarta, laakiin waxaa xusid mudan in si loo gaaro, qaabab aan rasmi ahayn loo baahdo in la sameeyo, maaddaama terminal-ka uu leeyahay oo keliya 144 Hz oo ah heerka ugu badan ee dib-u-cusbooneysiinta ee ay sameysay soo saaraha; Lagugama talin in la sameeyo, runti. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in bisha Maarso 4 aan heli doonno taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah oo leh shaashad ka weyn 144 Hz.
Astaamaha kale iyo tilmaamaha kale ee lagu xamanayay Nubia Red Magic 6 waxaa ka mid ah processor-ka ugu horumarsan ee processor-ka Qualcomm, kaas oo aan ka ahayn midka horey loo ogaa. Snapdragon 888, mobiil mobiil oo leh sideed buundo isla markaana gaari kara ugu badnaan saacad dhan 2.84 GHz. Qaab dhismeedka xudunta waa sida soo socota: 1x Cortex-X1 at 2.84 GHz + 3x Cortex-A78 at 2.42 GHz + 4x Cortex-A55 at 1.8 Dhanka kale, Snapdragon 660 waa midka aan ka helnay SoC-kan.
Dhinaca kale, waxaa la sheegay in moobilku ku imaan doono RAM 8/12 GB ah iyo 128/256 GB oo ah keyd gudaha ah. Ma sugeyno nooc kala duwan oo leh 16 GB oo RAM ah, laakiin sidoo kale waa la qiyaasay. Tan waxaa dheer, baytarigu wuxuu lahaan lahaa 5.000 Mah Mah iyo iyo wuxuu lahaan lahaa tikniyoolajiyad deg deg ah oo lagu xareeyo 66W, sida ku cad boodhadhkii ugu dambeeyay ee xayeysiiska ee soo saaraha Shiinaha soo saaray maalmo ka hor.
Shaashadda 'Red Magic 6', marka lagu daro inay ka badan tahay 144 Hz, waxay noqonaysaa tikniyoolajiyadda 'Super AMOLED' waxayna lahaan lahayd qiyaas qiyaas ahaan dhan 6.5 inji. Xallinta tani waxay noqon doontaa FullHD + oo ah 2.400 x 1.080 pixels, iyadoo qaabka soo bandhigga guddiga uu yahay 20: 9. Halkan kama heli doonno dalool shaashadda, oo aad uga yar naqshad naqshadeyn ah, laakiin halkii laga heli lahaa naqshad guud oo caadi ah oo leh muraayad iftiin leh oo xoogaa loogu dhawaaqo looxyada sare iyo hoose; kii ugu horreeyay, si loo dejiyo dareeraha sawir-qaadaha ee sawirrada hore iyo kuwa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Nubia Red Magic 6 waxay la imaan doontaa shaashad leh heer cusbooneysiin ka sarreeya 144 Hz
Meizu 18 horeyba wuxuu u lahaa taariikh sii deyn: tani waa taleefoonada leh shaashado qalooca u eg